बालेनको चर्चित चस्मा : बजारमा उच्च माग, कति पर्छ मूल्य ? – Dainik Samchar
May 17, 2022 8203
उनका अनुसार याे चस्मा बजारमा पहिला नै आइसकेको भएपनि बालेनको उम्मेदवारीपछि यसको चर्चा बढेकोले माग अत्याधिक बढेको हाे । ‘यो चस्मालाई मेटल ग्लास भनिन्छ, तर, उहाँ (बाेलन)ले लगाएको चस्मा चर्चित भएपछि सबैले बालेन ग्लास नै भन्छन्, अहिले नाम नै ‘बालेन चस्मा’ भएको छ,’ उनले भने । ती व्यापारीका अनुसार यो चस्माको मूल्य भने धेरै महँगो छैन । उनले सो चस्माको मूल्य ७ सय देखि ३ हजार २ सय रूपैयाँसम्म पर्ने बताए । जुन रातो, सेतो, कालो तथा गोल्डेन रङ्गमा पनि पाइने उनले बताए ।
Prevबालेनको पक्षमा किन यसरी महिनौँदेखि खटिइरहेका छन् कलाकार निर्मल शर्मा गैँडा ? यस्तो रहेछ भित्री रहस्य
Nextबालेनले गीत गाए म नाच्छु : उपमेयर उम्मेदवार सुनिता डंगोल